MAXAA KEENA BUROOYINKA WAJIGA IYO QOORTA KU DHACA? By Amina A. Mohamed | Baligubadle Media	Home
BALIGUBADLE MEDIA MAXAA KEENA BUROOYINKA WAJIGA IYO QOORTA KU DHACA? By Amina A. Mohamed
March 9, 2013 - Written by editor
sababaha keena Burooyinka ku dhac wajiga Iyo Qoorta …se Dumarku ma ogyihiin sida ugu fuduud ee looga hor tagi karo Iyo Jidhka labada nooc iskugu jira?
Marka hore waxaan salaamayaa shabakada hadhwanaagnews iyo hawlwadeenadeeda, iyo dadka akhristayaasha ah, waxaan si gaara u salaamayaa Hablaha ku nool aduunka daafihiiisa ee sida tooska ah u suga maqaaladayda, kana faaiidaysta, dhamantiin waan idin mahad celinayaa meel kasta oo aad daafaha dunida ka joogtaan. Marka hore waxaan ku faraxsanahay Email- da ay isoo direen hablo badan oo lahaa jidhka saliida leh, dhib badanina ka haysto finanka iyo wax la midka ah. Hadaba hablahan oo is badal wayn ku dareemay (homemade remedies) maqaalo hore oo aan ka qoray jidhka saliida leh. Waxaan idin leeyahay aad iyo aad ban ugu faraxsanahay in aad dareenteen is bedel wayn oo ay wax idin tartay taladaydii. Waxaanan idiin rajaynayaa inaad barateen jidhkiina noociisa iyo sida loola dhaqmi karo.
Iygana waxaan aad ugu faraxsanahay hablo ii soo sheegay inay ka heleen cuntooyinkii oo ay caawisay jidhkooda oo ahaa jidhka qalaylka (dry skin), markale dhamantiin walaalo waan ku faraxsanahay inay wax idin tareen waxyabo aad fudud runtiina aad ka heli kartaan madbakhiina.
Waxaan hore uga hadlay Haaraha , Burooyinka Iyo Finanka mad madoow, se email- ay ii soo direen hablo badan oo isoo waydiiyay burooyinka wajiga ku dhaca iyo qoorta, sidaa awgeed ayaan maanta ugu soo celiyay oo aan faahfaahin dheerad ahna ka soo bixiyo Burooyinka waxyabaha keena iyo sida ugu fudud ee looga hor tagi karo. InshAllaah Haarahana se maqaalkan ka ku xiga ayaan ku soo qaadan doona mar kale IA.!
Hadaan ku soo noqdo waxad iga sugayseen Maanta waxaa ka hadlayaa jidhka iskugu jira labada nooc ee loo yaqaan (combination skin) Iyo Burooyinka ku dhaca Wajiga Iyo Qoorta. (blackheads or black dots)
Burooyinkan ayaa ah kuwo ka dhashay waxa loo yaqaano (hair follicle) oo ah barta ay timaha xaadu ka soo baxdo.Hadaba jidhka saliid leh ayaa sii daaya saliid iyo dhidid aad u tiro badan ka dibna jeermis noqda, oo ku soo uruura meesha xaadu ka soo baxdo. Intaa ka bacdi jidhka hoostiisa meesha loo yaqaan (hair follicle) ayaa midabkeedu madoow noqdaa, muddo ka bacdina waxa dibada uga soo booda burooyin yar yar, sababta oo aha uskagii iyo dhididkii ku uruuray meeshaas oo hawadii ka xidhmatay jidhka, jidhkan saliida leh ayaa ah mid markasta u bahan nadiifin iyo qalajin loo isticmaalayo waxyaabo saliidu ku yartahay.
Burooyinka ayaa ah kuwo si dhibyar u tagi kara,hadii uu jidhku yahay mid dabiici ah oo aan dhib kale soo gaadhin, waayo waxay ku tagaan jidhkoo xoog loogu xoqay (facial scrub) iyo uumis badan, biyo diiran, iyo tuwaal kulul. Se haduu yahay tusaale ahaan jidh wax la mariyay ama khafiifay oo burooyina ka soo baxeen, waxaan aad iyo aad idiinkala dardaaramayaa in aanu qofku isticmaali Karin waxan aan soo qoray, waxaan aqoon badan u leeyahay jidhka dhibtu gaadho waxa ku dhici kara ee kale hadaan loogu tala galin, walaalo idinlama rabo in aad jidhkiina dhibkale sii gaadhsiisaan!??? jidhkan dawada la mariyay uma adkaysan karo, uumis, (facial scrub), biyo kulul, iyo tuwaal kulul midna laguma samayn karo.!!
Hadaba, hadaan ku soo noqdo nocyadii jidhka ee aan mudooyinkanba ka hadlayay, maanta waxaan idiin hayaa jidhka loo yaqaano (combination skin) jidhkan ayaa ah mid aanay inta badan hablaha somalidu aqoon u lahayn, oo had iyo jeer waxaad moodaa inaynu naqaano uun jidhka qalaylka, jidhka saliida badan, iyo jidhka wax diida, se jidhkan ayaa ah mid aan dhib badanayn oo u dhaw jidhka caadiga ah hadii si fiican loola dhaqmo.
4. Congested skin—jidh xumaday oo daldalooladiisuna xidhmeen, finana kudhageen gadhka, ama ahaan jiray markiisii hore (oily skin)
Fiiro gaar ah: Walaalo waxaan idinla socodsiinayaa inaan maqaaladayda aan kaga hadlayo quruxda dabiiciga iyo dhibatooyinka ku dhaca wajiga aan ka dhigi doono IA, bishii laba jeer oo qudha inaan soo qoro IA. Waxayna noqon doontaa bisha badhtankeeda iyo dhamaadkeeda, markaa taasna waydun la socondoontaan.
Amina Abdillahi Mohamed
Fan page: Free skin care advice, beauty tips & Discussion